Waa Kuwoo 10-ka Atirisho Ee Shahid Kapoor Jaceylka Waalida Ah U Qaaden (+Sawiro) – Filimside.net
Waa Kuwoo 10-ka Atirisho Ee Shahid Kapoor Jaceylka Waalida Ah U Qaaden (+Sawiro)
January 20, 2019 Ali Aadan
Shahid Kapoor waxuu kamid yahay atoorayaasha ugu caansan Bollywoodka waqtigaan waana atoore qaab jiliin wacan sido kalena hader haleelay wadadii guusha maadama Padmaavat sanadkii hore Blockbuster u noqday.
Hadaba macluumadka xidigaan laga qoray xan iyo xaqiiqaba waan idiin la wadaagena, markaan waxaan idiin heynaa 10-ka atirisho ee Shahid hada kahor jeclaaden ama xirirk jaceyl ee qarsoon la yeeshteen.
Inta badan 10-kan atirisho waa warar xan ah oo aan xaqiiqo ku saleesnen maadama saxaafada ay isku xamato jilayaasha caanka ah hadana Shahid xiliyo kala duwan ayaa la arkay isagoo 10k-kan atirisho kolma mid waqti la qadaanayo xiriir hoosana la leh sida wararka xanta ah sheegen.
Hadaba halkaan hoose kaga bog 10-ka Atirisho ee hada kahor Shahid jaceylka u qaaden.
1 – Hrishitaa Bhatt:
Atariishadan Hrishita Bhatt ayaa shukaansan jirtay Shahid muddo dheer ka hor inta aysan ku soo biirin Bollywood-ka, ilaa markii dambe uu ka noqday xiriir aan guul lahen oo wey kala hareen.
2 – Amrita Rao:
Amrita Rao iyo Shahid Kapoor ayaa sidoo kale la isku xantay inuu xiriir jacayl ka dhexeeyey tan iyo markii ay labadoodu keeneen filimkoodii ugu horreeyey e Ishq Vishk balse si dhaqsi ah ayee ukala hareen hadana sida wararka sheegen.
3 – Kareena Kapoor:
Shahid Kapoor iyo Kareena ayaa waqti dheer uu xiriir ka dhexeeyey, balse labada xidig isfaham dari ayaa soo dhexmartay ayadoo ay kala hareen markii dambe waxuuna xiriirkoda kamid noqday kuwa ugu caansan Bollywoodka taariikh ahaan.
4 – Vidya Balan:
Haddana waxaa la soo wariyay mudo kadib in xiriir ay yeeshten Shahid iyo Vidya Balan kadib markii uu Shahid Kareena kala tagen balse Vidya iyo Shahid ayagana xiriirkoda masii waarin.
5 – Priyanka Chopra:
Priyanka Chopra iyo Shahid Kapoor oo waqti dheer jacayl wada jilayey ayaa goor dambe go’aansaday inay xiriirkooda u bedelaan mid caadi ah oo saaxiibtinnimo waxayna Priyanka kamid noqotay gabdhaha Shahid uu soo jiitay.
6 – Sonakshi Sinha:
Atirishada Sonakshi Sinha ayaa iyaduna lagu xamanayey mudo dheer inay shukaansatay Shahid Kapoor, Sonakshi waxaa ka tan batay fir fircoonida Shahid intii ay duubayen filmka R…Rajkumar aad ayeena isugu soo dhowaaden.
7 – Anushka Sharma:
Anushka aaa lagu xaman jiray inee jeclaatay Shahid Kapoor aadna uu usoo jiitay gabadhan quruxda badan balse wararka xanta ah waxay sheegen in xiriirkoda uu ku dhamaaday sababo aan la garaneynin.
8 – Jacqueline Fernandez:
Shahid iyo Jacqueline ayaa lagu arkay iyagoo ka soo baxaya maqaayad ku taala magaalada Mumbai waqti dambe habeenkii, waxaana ay labaduba u muuqdeen kuwo xaaladoodu tahay mid deggan aad ayaana la isugu xaman jiray.
9 – Sania Mirza:
Sania Mirza ayaa markii ugu horreysay oo ay aragtay Shahid Kapoor jeclaatay, waxaana la sheegayaa in labada xidig ay xitaa ka wada hadleen arrimo la xiriira mustaqbalkooda balse calafka ayaa kala geeyay.
10 – Mystery Girl:
Gabadhan oo aan weli keenin wax filim ah Bollywood-ka ayaa la arkay iyadoo dhawr jeer Shahid Kapoor la qaadanaysa kulamo qorsoodi ah kahor inta uusan guursan Mira Rajput, waxaana la sheegay in meesha uu ku jiro shukaansi iyo xiriir Jacayl, wararka qaar ayaana sheegaya in Shahid uu faraanti u galiyey balse waxaa xaqiiq noqotay in Shahid uu guursaday Mira Rajput gabarna ay u dhashay….